Ahoana no ahafahan'ny Startups mandresy ny fanamby ara-teknolojia mahazatra momba ny varotra | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 8, 2021 Zoma 12 Novambra 2021 Thibaut de Lataillade
Ny teny hoe "fanombohana" dia manjelanjelatra eo imason'ny maro. Izy io dia miteraka sarin'ireo mpampiasa vola mazoto manenjika hevitra an-tapitrisa dolara, birao manara-penitra ary fitomboana tsy misy fetra.
Saingy fantatry ny matihanina amin'ny teknolojia ny zava-misy tsy dia mahafinaritra ao ambadiky ny fantasy fanombohana: ny fahazoana toerana eo amin'ny tsena dia havoana lehibe hiakarana.
At GetApp, manampy ireo fanombohana sy orinasa hafa izahay hahita ny rindrambaiko ilainy mba hitomboany sy hanatratrarana ny tanjony isan'andro, ary nianatra zavatra vitsivitsy momba ny fanamby sy ny vahaolana amin'ny fitomboan'ny orinasa izahay.
Mba hanampiana ireo fanombohana manokana indrindra dia niara-niasa taminay vao haingana Startup Grind – vondrom-piarahamonina fanombohana an-tserasera lehibe indrindra eran-tany – mba hamoahana ireo fanamby ara-teknika faran'izay sarotra ataon'ireo mpitarika fanombohana. Ny tolona henonay matetika avy amin'ireo mpitarika ireo dia ny fananganana fanatrehana an-tserasera mahomby sy fitadiavana rindrambaiko mamaha ireo olana fantatra.
Noho izany, amin'ny maha-mpanomboka manana loharanon-karena voafetra, ahoana no hahitanao an-tserasera amin'ny fitadiavana ny teknolojia mety, tsy mandany harena sarobidy?
Ny valiny dia ny fananganana teknolojia ara-barotra mahomby (martech), ary amin'ny GetApp te hanampy anao hanao izany izahay. Ireto misy toro-hevitra telo hanampy anao hanantena sy handresy ireo fanamby martech mahazatra.
Soso-kevitra 1: Te hahomby ve ny Martech anao? ianareo mila mba hanana drafitra napetraka
Rehefa niresaka tamin'ireo mpitarika fanombohana izahay dia nahita izany efa ho xnumx%1 dia efa manararaotra ny fitaovana martech. Ary izay tsy manararaotra dia tsy afa-manoatra; mihoatra ny antsasaky ny mpampiasa tsy martech no mahazo fanampiana ara-barotra avy amin'ny masoivoho ara-barotra ivelany.
Inona anefa no lalaovin'izy ireo?
Raha nanontanianay ireo fanombohana mampiasa fitaovana martech raha manana drafitra izy ireo ary manaraka izany, dia mihoatra ny 40% no nilaza fa manao elatra fotsiny izy ireo.
Sakana lehibe amin'ny fanatrarana stack martech mahomby izany. GetAppNy fanadihadiana momba ny fanombohana dia nahita izany Ny fanombohana tsy misy drafitra martech dia avo efatra heny noho ny filazana fa tsy mahafeno ny tanjon'ny orinasany ny teknolojia ara-barotra.
Te hanampy anao hanatratra ny tanjonao amin'ny raharaham-barotra izahay, ary ny valin'ny fanadihadianay dia manome tondrozotra mazava tsara hahatongavana any: Manaova drafitra martech ary mifikitra amin'izany.
Dingana manaraka: Angony ekipan'ny solontena manomana drafitra avy amin'ny fikambananao, avy eo manomàna fivoriana fanombohana hamaritana izay fitaovana vaovao ilainao miaraka amin'ny fandaharam-potoana fampiharana azy ireo. Ampidiro dingana iray ao amin'ny drafitrao ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fitaovana ara-barotra efa misy mba hahazoana antoka fa mbola manampy anao hahatratra ny tanjon'ny fandraharahana izy ireo. Zarao amin'ny mpandray anjara rehetra ny drafitrao, ary avereno jerena sy amboary araka izay ilaina.
Soso-kevitra 2: Mazava ho azy, mety ho be loatra ny fitaovana Martech, saingy misy lalana mankany amin'ny fahombiazana ary mendrika ny ezaka ny fiaraha-miasa.
Ny rindrambaiko marketing dia mety ho mahery vaika eo am-pelatanan'ny ekipa efa za-draharaha, fa ny isan'ny endri-javatra sy ny fahaiza-manao miaraka amin'ny maoderina. teknolojia marketing mety ho be loatra ho an'ny mpampiasa vaovao ihany koa.
Ireo mpitarika fanombohana niresaka taminay dia nitanisa ireo endri-javatra tsy ampiasaina sy mifanipaka ary naneho hevitra momba ny fahasarotan'ny fitaovana martech amin'ny ankapobeny ho ny sasany amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny martech.
Amin'ny lafiny iray, ny tombontsoa azo avy amin'ireo fitaovana ireo dia mendrika ny fanamby. Ireo mpitarika fanombohana ireo ihany no nitanisa ny firotsahan'ny mpanjifa nohatsaraina, ny tanjona mazava kokoa, ary ny fampielezan-kevitra ara-barotra mahomby kokoa ho toy ny tombontsoa telo voalohany amin'ny stack martech mahomby.
Noho izany, ahoana no ahafahanao mankafy ny tombotsoan'ny teknolojian'ny varotrao nefa manamaivana ny fahasorenana sy ny fihemorana amin'ny enta-mavesatra be loatra? Amin'ny maha-mpitarika orinasa teknolojia ahy dia afaka milaza aminao aho fa toerana tsara hanombohana ny fanamarinana stack martech.
Ny fanofanana fanampiny ho an'ny mpampiasa farany dia afaka mandeha lavitra amin'ny famongorana ny fitaovana martech anao. Ary a drafitra martech mety dia tokony hanampy anao hamaha ny sasany amin'ireo olana ireo amin'ny alàlan'ny fisafidianana fitaovana saro-pady amin'ny voalohany.
Nanolotra hevitra momba ny fomba famalian'izy ireo ireo fanamby martech ireo ihany koa ireo mpitarika fanombohana nohadihadianay. Ny fahalalan'izy ireo mifototra amin'ny traikefa dia afaka manampy anao hamolavola ny drafitry ny valin-teninao manokana, raha sendra olana mitovy amin'izany ianao:
Dingana manaraka: Angony ny antontan-taratasin'ny dingana ho an'ny teknolojia ara-barotra vaovao (na noforonina ao an-trano na nomen'ny mpivarotra anao) ary zarao amin'ny mpampiasa farany izany. Manomàna fotoam-piofanana tsy tapaka (samy tarihin'ny mpiasa na omen'ny mpivarotra) ary manendry mpampiasa faran'izay mamaha olana sy mitarika atrikasa. Manangàna fantsona amin'ny fitaovana fiaraha-miasa izay ahafahan'ny mpampiasa mametraka fanontaniana sy mahazo fanampiana amin'ny fitaovana martech-nao.
Soso-kevitra 3: Raha te hahomby ianao dia atokàny farafahakeliny 25% amin'ny teti-bolan'ny varotrao ho an'ny fampiasam-bola Martech
Rehefa mamolavola ny paikadin'ny martech ianao, dia zava-dehibe ny mamaritra ny tetibola tena misy ary mifikitra amin'izany. Na dia mety halaim-panahy aza ny fampihenana ny fandaniam-bolan'ny martech hitehirizana teti-bola, ny skipping dia mety hampidi-doza ny orinasanao vao manomboka hihemotra sy hiato. Izany no mahatonga ny fanaovana benchmark amin'ny namanao mety hanampy anao.
Hevero fa ny 65% ​​amin'ireo fanombohana henonay fa mandany mihoatra ny ampahefatry ny teti-bola ara-barotra amin'ny martech dia nilaza fa mahafeno ny tanjon'ny fandraharahana ny stack, raha latsaky ny antsasany (46%) amin'ireo mandany latsaky ny 25% dia afaka manao toy izany koa. Fitarainana.
Ny 13% amin'ireo namaly anay ihany no mandany mihoatra ny 40% amin'ny teti-bolany amin'ny martech. Mifototra amin'ity fampahalalana ity, ny fanolorana toerana eo anelanelan'ny 25% sy 40% amin'ny teti-bolan'ny marketing anao amin'ny martech dia fomba fiasa matotra, raha ny momba ny benchmarking.
Ny teti-bolan'ny fanombohana dia mety miovaova be arakaraka ny haben'ny orinasa, fa ity misy angona fanadihadiana bebe kokoa momba ny tena lanin'ny namanao amin'ny martech:
45% amin'ny fanombohana dia mandany $ 1,001 - $ 10,000 / volana
<20% amin'ny fanombohana dia mandany $10,000+/volana
Ny 38% amin'ny fanombohana dia mandany latsaky ny $ 1,000 / volana
56% amin'ny fanombohana dia mitatitra amin'ny fampiasana endrika rindrambaiko ara-barotra maimaim-poana/fitaovana ara-barotra maimaim-poana
Raha ny marina, ny valan'aretina COVID-19 dia nanimba ny tetibola tamin'ny sehatra rehetra. Saingy hitanay fa na dia izany aza, 63% amin'ireo mpitarika fanombohana dia nampitombo ny fampiasam-bolan'izy ireo martech tamin'ny taon-dasa. Latsaky ny dimy isan-jato no nampihena ny teti-bolan'izy ireo tamin'io vanim-potoana io.
Dingana manaraka: Aorian'ny fametrahanao ny teti-bolanao, andramo ny vitsivitsy fitaovana maimaim-poana/fitsapana maimaim-poana hijerena izay mety amin'ny ekipanao. Manontany tena hoe fitaovana martech inona no hanombohana? Ny fanadihadiana nataonay dia nanambara fa ny fitiliana A/B, ny famakafakana tranonkala ary ny rindrambaiko CRM no fitaovana mahomby indrindra amin'ny fanampiana ireo fanombohana hanatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny varotra.
Download GetAppNy fananganana Martech Stack tena ilaina ho an'ny Startups Guide
Dingana 4 hanatsarana ny Martech Stack anao
Amin'ny maha fanombohana azy, ny fahatongavana amin'ny faobe mitsikera dia zava-bita lehibe, ary ny drafitra ara-barotra tsara sy ny stack martech mahomby dia tena ilaina mba hahatongavana any. Ity misy drafitra dingana efatra handraisana ny torohevitra nozaraina aminao:
Manaova drafitra Martech: Angony ny ekipanao, manapaha hevitra izay fitaovana ilainao, mamoròna drafitra fampiharana sy fandaharam-potoana, ary zarao amin'ny fikambananao. Avereno jerena tsy tapaka ary ahitsio araka izay ilaina.
Apetraho amin'ny fahombiazanao ny ekipanao: Omeo ny ekipanao ny antontan-taratasin'ny dingana, ny fitaovana fiaraha-miasa, ary ny fiofanana tarihin'ny mpiasa sy ny mpivarotra mba hanampiana azy ireo hampiasa ny stack martech anao araka izay azo atao.
Manaova teti-bola tena misy ary mifikitra amin'izany: Raha mandany latsaky ny 25% amin'ny teti-bolan'ny varotrao amin'ny teknolojia ianao, dia atahorana ho lavo lavitra ny mpifaninana aminao. Tsarovy fa tsy maninona ihany koa ny mampiditra fitaovana maimaim-poana ao amin'ny stack martech anao raha mbola mahomby izy ireo.
Jereo ny stack martech anao: Tsidiho tsindraindray (farafaharatsiny indroa isan-taona) ny stack martech anao sy ireo mpampiasa fitsapan-kevitra mba hahazoana antoka fa mbola manampy amin'ny fanatanterahana ny hetsika ara-barotra ny fitaovanao. Esory ny fitaovana tsy ampiasaina ary atambatra ireo manana endri-javatra mifanipaka. Andramo fitaovana vaovao (mampiasa fitsapana maimaim-poana raha azo atao) mba hamahana ny filana tsy tanteraka.
Mirary soa ho anao izahay. Saingy manantena izahay fa afaka manao mihoatra noho ny fankaherezana anareo eny an-tsisin-dalana. Namorona fitaovana sy serivisy maimaim-poana maromaro izahay hanampy anao hahatratra ny tanjonao amin'ny fanombohana, anisan'izany ny anay Fitaovana AppFinder ary izahay Mpitarika sokajy miankina amin'ny mihoatra ny iray tapitrisa tsikera mpampiasa voamarina.
Jereo izy ireo, ary ampahafantaro anay raha misy zavatra hafa azonay atao hanampiana anao eny an-dalana.
1GetAppNy fanadihadiana momba ny teknolojia momba ny marketing 2021 dia natao ny 18-25 febroary 2021 teo amin'ireo namaly 238 mba hianatra bebe kokoa momba ny fampiasana fitaovana teknolojia marketing amin'ny fanombohana. Ny valin-kafatra dia nojerena ho an'ny toeran'ny mpitarika amin'ny fanombohana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, serivisy IT, marketing / CRM, varotra / eCommerce, rindrambaiko / fampivoarana tranonkala, na AI / ML.
GetAppNy fanontaniana momba ny fahombiazan'ny teknolojia ara-barotra momba ny fahombiazan'ny teknolojia dia ahitana ireto safidy manaraka ireto (voatanisa eto amin'ny filaharan'ny fahombiazana araka ny naoty voalanjalanja): A/B na fitsapana maro isan-karazany, fanadihadiana amin'ny Internet, fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM), fampitandremana marobe, media sosialy marketing, sehatra marketing votoaty, sehatra ara-barotra finday, fitaovana mpanamboatra tranokala, sehatra data mpanjifa (CDP), varotra fikarohana (SEO/SEM), sehatra personalization, fanekena sy fitantanana preference, rindrambaiko automation marketing, sehatra fanadihadiana / traikefa amin'ny mpanjifa, rafitra fitantanana votoaty (CMS). sehatra marketing multichannel, sehatra marketing mailaka, dokam-barotra an-tserasera, fitaovana fiarovana ny mpiasa.
Tags: Fanadihadiana momba ny Teknolojia Marketing 2021appfinderfitsapana fitaovana ara-barotra maimaim-poanafitaovana marketing maimaimpoanatetibola marketingmarketing stackteknolojia marketingfampiharana martechmartech planstack martechmartech stack auditmartech stack budgetfanombohana martech budgetstartup martech stack
Thibaut de Lataillade, GetApp GVP, manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny fitantanana orinasa, varotra ary varotra eo ambanin'ny fehikibony. Manana rakitsoratra voaporofo amin'ny rahona, mobility, marketing dizitaly, CRM, marketing, varotra ary paikady fitomboana izy. Thibaut dia nitana toeran'ny mpitantana sy mpanatanteraka tao amin'ny orinasa teknolojia lehibe toa an'i Cegedim sy SAP.